Fifamindrana arak’asa teo amin’ny Talen’ny Fandaharan’asa sy ny Fampitaovana ny Fandraharahana ny Fonja (DPRP)
Published Date: 17 décembre 2021
📸 Pejy an-tsary Zoma 17 Desambra 2021 :
🤝 Fifamindrana arak’asa teo amin’ny Talen’ny Fandaharan’asa sy ny Fampitaovana ny Fandraharahana ny Fonja (DPRP) teo aloha Rtoa RAHERINIAINA Emma Clotilde Vivianne, sy ny DPRP vaovao Rtoa RAZAFIARISOA Sandrina Ernestine
➡️ Lanonana notontosaina teto Anjohy, teo ambany fiahian’Atoa Tale Jeneralin’ny Fandraraharana ny Fonja (DGAP) Atoa RANAIVO ANDRIAMAROAHINA Tovonjanahary, izay nisolo tena ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza.
Fifamindrana arak’asa teo amin’ny Talen’ny Fanavaozana ny Fandraharahana ny Fonja (DRP)
Pejy an-tsary Zoma 17 Desambra 2021 :
🤝 Fifamindrana arak’asa teo amin’ny Talen’ny Fanavaozana ny Fandraharahana ny Fonja (DRP) teo aloha Rtoa RAZAFIARISOA Sandrina Ernestine, sy ny DRP vaovao Rtoa VOLAZARA Sakina Mohamady.
➡️ Lanonana notontosaina teto amin’ny tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra, teo ambany fiahian’Atoa Tale Jeneralin’ny Fandraraharana ny Fonja (DGAP) Atoa RANAIVO ANDRIAMAROAHINA Tovonjanahary, izay nisolo tena ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza.
Fivoriana ara-potoana farany atrehin’ireo mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Mpitsara (CSM)
📸 Pejy an-tsary Alakamisy 16 Desambra 2021 :
⚖️ Andro faharoa amin’ny fivoriana ara-potoana farany atrehin’ireo mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Mpitsara (CSM) amin’ity taona 2021 ity (hifarana rahampitso Zoma 17 Desambra 2021 ny fivoriana)
📌 Maro ireo lahadinika : ohatra ny fandrosoana eo amin’ny laharana, fanendrena amin’ny andraikitra vaovao, famindran-toerana hiasana.
Tetikasa PAJMA: Maro ireo fandaharan’asa nolaniana ho an’ny 2022
Published Date: 15 décembre 2021
➡️ Tontosa androany Alarobia 15 Desambra 2021 teto amin’ny Tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra, ny fandaniana ny Drafitrasa 2022, ho an’ny Tetikasa fanohanana ny Fitsarana eto Madagasikara (Projet d’Appui à la Justice de Madagascar) na PAJMA. Vita ihany koa ny tatitra 2021.
📌 Araka ny fanazavana nomen »i Rtoa Mpandrindra mpisolo toerana amin’ny PAJMA, dia neken’ny Komity Mpitantana (COPIL) ireo tetikasa goavana, raha tsy hitanisa afa-tsy:
🔹Ny fanamboarana ny efitra faha-6 etsy amin’ny Lapan’ny Fitsarana Anosy
🔹Ny asa fanitarana ny Fonjan’i Manjakandriana,
🔹Ny fampidirana jiro sy rano fisotro madio ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana Mpandraharahan’ny Fonja (ENAP) ao Antetezambaro Toamasina.
⭐ Marihina fa mety hisy fanitsiana ireo fandaharan’asa sy ny tetibola 2022 satria mbola miankina amin’ny fahavitan’ireo asa voafaritra amin’ity taona 2021 ity izany. Sambany tokoa mantsy no lasa mialoha ny famaritana sy fandaniana ny Drafitrasa amin’ny taona ho avy, mba hahafahana manomboka ara-potoana tsara ny asa.
✍️ Tsiahivina fa ny taona 2019 no natsangana ny Tetikasa PAJMA. Mizara 5 ireo fandaharan’asa. Ohatra ny fanohanana ireo fiofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ho an’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Fandraharahana ny asam-pitsarana sy ny Fandraharahana ny fonja, ary ny fampitaovana amin’ny ankapobeny sy fandraisana an-tanana ireo fidinana ifotony isan-karazany. Tanjona ny hisian’ny Fitsarana tsy mitanila, misokatra amin’ny daholobe, mahomby, miady amin’ny kolikoly sy mandray anjara amin’ny fametrahana ny tany tan-dalàna.
✔️ Nandray anjara tamin’ny fivoriana androany, ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, ireo solontenan’ny « Agence Française de Développement » (AFD), ny Vondrona Eoropeanina (UE), ny Masoivohon’i Frantsa, ary nitarika sy nisolo tena an’Atoa Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, kosa, ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana Rtoa RABY SAVATSARAH Ain’Harimanga Gabrielle.
TF Toamasina: Mitohy ny fidinana ifotony
Published Date: 13 décembre 2021
➡️ Tsy mikely soroka fa manohy hatrany ny ezaka. Mitohy ny fidinana ifotony ataon’ny Fitsarana ara-bola (TF) ao Toamasina. Tanjona ny asa fanentanana, mitety Faritra, ho fampanajana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-mpanjakana ho an’ireo vondrom-bahoakam-paritra.
📌 Ny Faritra Alaotra Mangoro indray no nanaovana ny fihaonana niaraka tamin’ireo Ben’ny tanàna, ireo mpanolo-tsain ‘ ny tanàna ary ireo mpitam-bolan’ny Kaominina. Solontena avy amin’ny Kaominina miisa 9 ho an’ny Distrikan’ Andilamena no nihaonana ny 13 Desambra 2021, raha tompon’andraikitra avy amin’ny Kaominina miisa 22 ho an’ ny Distrikan’Amparafaravola no noraisina ny Talata 14 Desambra maraina. Ireo avy amin’ny Kaominina miisa 22 ho an’ny Distrikan’Ambatondrazaka kosa no novoriana ny tolak’andron’io ihany.
⭐ Fihaonana izay nahitam-pahombiazana sahady satria liana tokoa ireo Tompon’ andraikitra eny anivon’ireo Kaominina ireo tamin ny fanazavana sy ny fanentanana izay natao momba ny fanajana ny lalàna mifehy ny fikirakirana volam-panjakana. Nangataka izy ireo ny mbola hitohizan’ny asa toy izao. Ankilany dia ,afa-po ny delegasiona avy amin’ny TF Toamasina tamin ny fihaonana satria tanteraka ilay tanjona manao hoe « fitsarana manatona ny vahoaka », ka nahafahana nijery sy nihaino ny zava-misy iainan’ireo Kaominina ambanivohitra ireo mahakasika ny fitantanana ny volam-panjakana.
✔️ Mbola hitohy ny Zoma 17 Desambra izao ny asa any Ambatondrazaka amin’ny fanaovan’ireo tompon’andraikitra fotoam-pitsarana hamoahana ireo didy raikitra sy tatitra am- pahibemaso amin’ireo vokatry ny asa fitsirihana natao nandritra ny taona 2020 -2021.